FIANTOHANA ARA-PAHASALAMANA “MAHAVELONA” : Laharam-pamehana ny tantsaha mpamokatra · déliremadagascar
FIANTOHANA ARA-PAHASALAMANA “MAHAVELONA” : Laharam-pamehana ny tantsaha mpamokatra
Socio-eco	 5 mai 2018 lynda
Tantsaha mpamokatra lavanila sy ny ankohonany, ao amin’ny faritra SAVA, manodidina ny 50.000 hahazo fiantohana ara-pahasalamana maimaim-poana. Vina ho tratrarin’ny tranom-piantohana Mahavelona amin’ny fankalazana ny faha-folo taonany io isa io. Nankalaza ny faha-dimy taona nisiany i Mahavelona ny 19 sy ny 20 aprily 2018 lasa teo, tao Andapa. Tao anatin’izay dimy taona izay, tantsaha mpamokatra lavanila miaraka amin’ny ankohonany miisa 32.300 no efa noraisiny an-tanana.
Ny orinasa Symrise no nandoa ny latsak’emboka an’ireto mpahazo tombontsoa ireto. “Mpamokatra ranomanitra amin’ny alalan’ny lavanila ny orinasa Symrise. Miara-miasa amin’ireo tantsaha mpamokatra ny akora ampiasanay izahay. Mba hampandeha ny asan’izy ireo, nandray an-tanana ny lafiny ara-pahasalaman’izy ireo izahay”, hoy ny tomponandraikitry ny Symrise. Ao anatin’ny tetikasa Zina ny fananganana ny tranom-piantohana Mahavelona. Manampy amin’ny fampandehanana ny tetikasa ihany koa ny fikambanana Positiv Planet. Tanjon’ny tetikasa ny fisitrahan’ny tantsaha rehetra ny fitsaboana manara-penitra.